Iyo geobloggers halkan ayey ku shireen… - Geofumadas
… Iyo geobloggers ayaa halkan isugu yimid…
Juunyo, 2017 Featured, egeomates My
Qof lahaa in ay di'i fikradda ah fadhida meel isku mid ah, koox ka mid ah gebi ahaanba kala duwan ee shakhsiyadda, dadka u maleeyay oo la eego dhaqanka, laakiin si wadajir ah ula kala duwanaansho ay u noqon hadla Isbaanish, waa ka daran dareen ku saabsan waxa ka dhaca macnaha geospatial.
Kani waa "Kulankii Ugu Horeeyay ee Qaranka ee Geobloggers", oo lagu dardar galiyay qaab dhismeedka Shirweynaha Kowaad ee injineerinka Geomatic ee Jaamacadda Polytechnic ee Valencia. Uma fududeyn qabanqaabiyeyaasha, iyadoo la tixgelinayo in seddex saacadood gudahood la filayo inuu yeesho aragti dhiirrigelin leh oo ku saabsan sida ay tani u dhacday, doorka ay ka ciyaaraan saameynta dadka iyo halka ay ku imaan karto.
Waxay noqon doontaa mid xiiso leh, iyada oo la tixgelinayo in qaabka waxa Geoblogger u eg yahay uusan weligiis qofna qeexin. Waxay si fudud ugu xuubsiibatay iyada oo ay sabab u tahay dadaallada shaqsiyeed, wadareed iyo kuwa isku dhafan; qaar waxay ku dhasheen hiwaayad, kuwa kalena waxay ku dhasheen xiise ku meel gaar ah, qaar kalena waxay ahaayeen talo soo jeedin ka timid dhinac saddexaad oo ah galab biir iyo shiil. Sidoo kale, dhammaantood kuma badbaadeen waqtiga, qaarkood xitaa waxay lahaayeen xilliyadoodii sabtida oo ay mar kale dib u soo baxeen.
Si kasta oo ay ku gaadheen halkaas, aakhirka waa dad, "Geobloggers." Dhageysiga macnaha guud wuxuu siin doonaa aragti wax yar laga ogyahay cidda ka dambeysa gelitaanka cusub subaxnimada Isniinta 10ka subaxnimo, isku xirka Twitter-ka 12ka duhurnimo, ama sawirka kooxda shaqada Arbacada. Marka laga soo tago magaca ama sumcadda caanka ah, waa kuma Geoblogger markaan maqalno isaga oo ka hadlaya mowduuc uu si dirqi ah u haysto daqiiqado yar sababta oo ah tan xigta ayaa soo socota.
Caadi ahaan, dhogor, caadi, caan ama magac la'aan, kooxda Geobloggers waxay gaareen heer saameyn shaqsiyadeed aysan muhiim ahayn, laakiin kooxda marka la eego waxa ka dhaca cilmiga teknolojiyadda ee lagu dabaqay cilmiga dhulka. . Haddii aan jeclaanno iyo haddii kaleba, akadeemiyadda, macnaha guud ee furan, shirkadda gaarka loo leeyahay iyo, wixii ka sarreeya, dadka isticmaala gaarka loo leeyahay waxay ogaadeen waxa Geobloggers ugu dhow edbintooda ay sheegaan, sheegaan oo xitaa mararka qaarkood ay ku soo jeediyaan hadalkeeda.
Cidna kuma magacaabin iyaga Geobloggers, kaliya kani waa shirkii ugu horreeyay, waan maqli karnaa "ka hor", laakiin waa inaan la soconaa waxa ka dhacaya "ka dib", maadaama xilliyadan lagu jiro dunidoo dhan, aadan awood u yeelan karin inta udhaxeysa. oo qoraa shaqsi ahaan bishii mar, kan tweet 2dii saacadoodba mar ama midka matala baloog wadareed. Shaki la'aan qof walba wuxuu leeyahay ujuurada kaqeybgalka.
Muxuu yahay qoondadaas ... waxaan kaliya ku fahmi doonnaa is afgarad kadib Dhacdada 5-ta Luulyo.
Goorta iyo meesha
Julaay 5, 2017. Dugsiga Farsamada Sare ee cilmiga Geodetic, Cartographic iyo Topographic Engineering ee Jaamacadda Polytechnic University of Valencia. Dhismaha 7 I ee Xarunta Vera. Qolka 0.1.
Haddii qof ka qayb geli karo, yaan la seegin. Kuwa fog, waxay ku sii wadi karaan socodka cinwaanka soo socda:
Maxaa Geobloggers ka qayb qaadan doona
Dhammaan kuwa wax qora ee wax ku qoraya xilliyo muuqaal gaar ah, maqaallo ku saabsan boggooda (ugu yaraan bishiiba mar ama lagu garto internetka), iyo sidoo kale qaar ka mid ah aaladaha maanta loogu isticmaalo geotechnologies.
Qofkastoo la xalinayo
Dhamaan kuwa xiiseynaya maadada, laga bilaabo xirfadleyda ilaa ardayda, shirkadaha, ganacsatada iyo maamulada dowliga ah.
In kasta oo ay mari karto isbeddello yar, qoraalka habka habka ah ayaa horay loo soo jeediyay, kaas oo ujeedkiisu yahay in la abuuro gole muhiim u ah doodda iyo ka doodista xirfadda, iyada oo laga faa'iideysanayo xaqiiqda ah in xubnaheeda ay ka warqabaan xaqiiqda iyo arrimaha hadda jira, iyo sidoo kale sameynta iswaafajin u dhexeeya shahaadooyinka kala duwan ee la xiriira Waxay leeyihiin Geomatics sida isku xira isku xira.
11-12: 00: Ku soo dhowow dadka soo xaadiraya
12-12: 30: Furitaanka guud ee xafladda
ETS Geodetic, Cartographic iyo Topographic Engineering
12: 30-13: 30: Soo jiidashada joornaalada:
Héctor (Geographica), David Piles (Strageo), Jorge del Río (Orbemapa), valvaro Anguix (GVSig), Roberto (Gis & Beers), carscar Martínez, (In ka badan SIG), Antonio Rodríguez (Blog IDEE), Geofumadas (video), Nosolosig (fiidiyow).
Maxaad baratay, maxaad qabanaysaa iyo maxay barta blogku ka hadlaysaa?
"Geoego"? calaamad shakhsiyeed, udhexeysi isweydaarsiga iyo iskaashiga
Miisaanka ma leeyahay? raacayaasha, inta u dhaxaysa tirada iyo tayada
Endogamy? wada shaqee si aad u sheegto
Qalab noocee ah ayaad isticmaashaa?
13: 30-14: 10: Qalabka iyo waxqabadyada:
Saaxiibada khariidada, CARTO, Creasolutions, eDiamsystems, Esri, Geoinquietos, GVSig, HALKAN.
14: 10-14: 40: Dood furan, oo udhaxeysa dhagaystayaasha iyo su'aalo ku saabsan hashtag #geobloggers on Twitter.
14: 45-15: 00: gabagabada iyo joojinta
15: 15: Cuntada iyo Isgaadhsiinta
Si aad u xasuusato
Badbaadiso isqawilka: https://twitter.com/hashtag/geobloggers?src=hash
Wargeyska The Mapping Magazine
Post Previous" Hore dhibcood Import iyo dhalin model ah dhul digital in file CAD a
Post Next 2 tricks la Microstation: Repair waxyeello files iyo dhibaatooyinka la billabo 3DNext »